Community & Society » ခေါင်းဆောင်ကောင်းထက် နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့လို…	17
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခေါင်းဆောင်ဆို တဲ့ နေရာဟာ …
manawphyulay says: တချို့နေရာတွေမှာတော့ လူကသာ ခေါင်းဆောင်နေရာ.. ဒါပေမယ့် ခေါင်းရှောင်တာက များနေတာကို တွေ့ရှိရတယ်…
တောင်ပေါ်သား says: မှန်သဗျို့
Ma Ma says: ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ နောက်လိုက်ကောင်းတွေ ရှိတဲ့နေရာကို ညွှန်ပေးရမလား။
manawphyulay says: အဲဒါတော့ ထောက်ခံတယ် တီတီမမရေ…
ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း ငြိမ်နေကြသလားလို့လေ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်လိုချင်တယ်
manawphyulay says: luluရေ…. မနောတို့အနားမှာ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာတွေ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ မနောတို့ကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတဲ့သူတွေလို့ မြင်မိပါတယ်ရှင်….
Alinsett @ Maung Thura says: .ခေါင်းဆောင် အနေအထားမှာ… နောက်လိုက်သူတွေ လိုက်ချင်အောင် ဦးဆောင်…
အောင် မိုးသူ says: Leader ကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ ခုခေတ်မှာ ခပ်ရှားရှားပဲ
Mike says: .မှန်ပါ၏
kai says: ဘာများခက်သလည်းလို့…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကိုယ့် ပိုက်ဆံနဲ့ကို အမုန်းခံနေတဲ့ လူမျိုး ဒီ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့ဖူးတယ်။ (ဘယ်မှ မကျိနဲ့၊ တဂျီးကို ပြောနေဒါ)
မြစပဲရိုး says: ငယ်တုန်း က အရိုက်ခံထားရတာ မို့ ကေးဝဋ် ပုဏ္ဍား လို အမာရွတ်မြင်တိုင်း အနာဟောင်းထ နေတာ မို့ ခွေးလွှတ်ကြပါ။ lol:-))))
kai says: ကိုရင်ဘ၀မှာတောင်.. အဖွားဝိတ်နဲ့.. ဆရာတော်က.. ကျုပ်တို့ညီအကိုတွေကို.. ကြိမ်းမောင်းတာတောင်မရှိ..
မြစပဲရိုး says: . နောက်လိုက်ကောင်း ဖြစ်ဖို့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ရှိဖို့ လိုသေးတယ်လေ မနောရဲ့။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဂေါင်းကောင်းတဦးဖြစ်ဖို့ နောက်လိုက်အဆွယ်ကောင်းကောင်း ရှိရမည်လေ…
manawphyulay says: ဒါဆို ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ သေချာပြောဦးလေ… လေ့လာလို့ရတာပေါ့